प्रचारप्रसार तिब्र पार्दै डा.केशव पौडेलको चुनावी टिम | khaltinews.com
प्रचारप्रसार तिब्र पार्दै डा.केशव पौडेलको चुनावी टिम
अमेरीका – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरीकाको निर्वाचन मिती नजिकिए संगै अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा. केशव पौडेल र उहांको टिमले चुनावी भेटघाट र प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनाएको छ ।
एनआरएन अमेरीकाको निर्वाचन हुन अव करिब ३ साता बांकी रहेका बेला डा. पौडेल संगै उहांको टिमका बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्धार शुनिल शाह, उपाध्यक्षका उम्मेद्धार रामकुमार स ुबेदी र राधा पौडेल, महासचिवका उम्मेद्धार बाबुराम लामा, सचिवका उम्मेद्धार होम गौतम तथा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका उम्मेद्धार गोपेन्द्र भट्टराई सहितको टिम शनिबार चुनावी भेटघाट तथा प्रचारप्रसारका लागी नर्थ क्यारोलिना पुगेको छ ।
शुक्रवार चुनावी भेटघाट प्रचारप्रसारका लागी टेक्सासको डालस पुगेका अध्यक्षका सबैभन्दा वलिया प्रत्यासी डा. पौडेल टेक्सासबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्धार शुनिल शाहका साथमा नर्थ क्यारोलिना पुग्नुभएको हो । नर्थ क्यारोलिनाका नेपालीहरुमाझ दोश्रो कार्यकालका लागी अध्यक्षमा उम्मेद्धारी दिनुपर्ने कारण तथा आफ्ना भावी एजेण्डा र यो कार्यकालमा गरेका कार्यहरुबारे डा. पौडेलले स्पष्ट पार्नुभएको थियो भने सहभागी अन्य पदका उम्मेद्धारहरुले पनि आफ्नो उम्मेद्धारी बारे स्पष्ट पार्नुभएको बताइएको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिए संगै डा. पौडेल र उहांको टिमले अन्य बिभिन्न शहरका नेपालीहरुमाझ भेटघाट तथा प्रचारप्रसार तिब्र पार्ने बताइएको छ ।
एनआरएन अमेरीकाको आगामी कार्यकालका लागी डा. पौडेल संगै टेक्सासको डालसका व्यवसायी गौरी जोशी, बर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेल र उपाध्यक्षद्धय राम सि पोखरेल र रबिना थापाले उम्मेद्धारी दर्ता गरेका छन् । ५ जनाले अध्यक्षका लागी उम्मेद्धारी दर्ता गरेपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा डा. पौडेल र जोशी बीच हुने पक्का भएको आंकलन गरिएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही १८ तारिखमा उम्मेद्धारको नामावली प्रकाशन गरिने छ भने २४ तारिख सम्म उम्मेद्धारी फिर्ता लिन सकिने छ । यस्तै उम्मेद्धारहरुको अन्तिम नामावली यही महिनाको २९ तारिखमा प्रकाशित हुनेछ र अर्को महिना अगष्ट ११ र १२ तारिखमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ ।